Analavory : taksiborosy nifandona tamin’ny fiara 4×4, ampolony naratra | NewsMada
Analavory : taksiborosy nifandona tamin’ny fiara 4×4, ampolony naratra
Ampolony ireo naratra mafy vokatry ny lozam-piarakodia nitranga, omaly tany Analavory. Nifandona tamin’ny fiara 4×4 ny fiara taksiborosy iray. Araka ny fitantaran’ireo niharam-boina, samy nandeha mafy ilay taksiborosy sy ilay fiara 4×4, saingy somary nangalatra tany amin’ny ankavanan-dalana ilay fiara 4×4 nefa tao anaty fiolahana mampidi-doza. Nanao izay ho afany ihany ireo mpamily, nefa samy tsy nahafehy intsony ny familiana ka nifandona avy hatrany ireo fiara.
Mafy ny fifandonana satria potika tanteraka ny loharan’ireo fiara roa nifandona. Naratra avokoa ny ankamaroan’ireo mpandeha tao amin’ilay taksiborosy. Voalaza fa ireo mpandeha nipetraka tany amin’ny seza farany aoriana ihany no tsy naninona. Tsy nisy kosa ny aina nafoy. Nentina haingana any amin’ny hopitaly ireo naratra.
Fa renim-pianakaviana iray koa no tapa-tongotra voadonan’ny fiara 4×4 iray teny Talatamaty, afakomaly maraina. Voalaza fa antony nahavoadona azy ny fitohanan’ny lalana sy ny hamaroan’ireo olona milahatra taxi-be. Nalefa avy hatrany eny amin’ny hopitaly HJRA ilay renim-pianakaviana niharam-boina. Maro amin’ireo mpiandry taxi-be tokoa matetika no tsy mahalala intsony izay hahafaty azy fa efa tafiditra eny afovoan-dalana mihitsy rehefa maika hifandrobaka fiara hody.